Fiqi: Qoor-Qoor Masharuuc Fahad Yaasiin ayuu u tagey Baydhabo | KEYDMEDIA ENGLISH
Fiqi: Qoor-Qoor Masharuuc Fahad Yaasiin ayuu u tagey Baydhabo
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug Axmed Maclin Fiqi ayaa mudooyinkii dambe isku bedelay mucaaradka ugu weyn Qoor-Qoor, oo baraha bulshadda ka dhaliila siyaasadiisa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ex-Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ayaa ku tilmaamay safarka Qoor-Qoor ee Baydhabo dallaalnimo siyaasadeed oo Forex oo kale ah, kaasoo loogu adeegayo danaha Fahad Yaasiin.
Fiqi sheegay in socdaalka Qoor-Qoor uu yahay mid laga abaabulay Villa Somalia, oo la doonayo in difaaco Kursiga Fahad Yaasiin, ee laga saarey liiska Xildhibaanada uu gudiga FEIT soo saarey todobaadkii hore.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug ayaa xusay in Qoor-Qoor iyo Xildhibaanada la socda ee tagey shalay Baydhabo ay galeen waan-qaan aan boos uga furnayn, oo lagu dhabar-jebinayo dadaallada RW Rooble ee dhameystirka doorashadda iyo dhaarinta Baarlamaanka cusub 14-ka April.
Qoor Qoor waxaa ku wehliya safarka Baydhabo Mahad Cawad, oo uu Fiqi sheegay inuu yahay ninka Farmaajo u qoro warqadaha lagu aflagaadeeyo RW Rooble. Fahad Yaasiin ayaa doonaya in kursigiisa la celiyay uu ku helo qaab waan-waan ah, oo Qoor-Qoor hormuud u yahay.
Waxaa ayaan-darro ah in rag sharaf leh ay hadda ka shaqeynayaan in kursiga Fahad Yaasiin sida sharci-darrada uu kusoo qaatay lasii daayo. Shaqadaas ma ahan mid iyaga loo dirsadey ama fasixi karaan kursiga,' ayuu yiri Fiqi.
Wuxuu intaas ku daray in Qoor-Qoor iyo kooxdiisa laga filayo inay ku dhawaaqaan marka uu soo dhamaado kulamada Baydhabo in Fahad Yaasiin iyo Lafta-gareen saxan yihiin, oo Rooble-na uu qaldan yahay, waxayna sharci-darro ku tilmaami doonaan afarta kursi ee FEIT uu celiyay.
Lafta-Gareen oo kasoo horjeestay 3 kursiga oo FEIT celisay ayaa sheegay dhawaan inuu joojiyay wadashaqeyntii Rooble ee dhinaca doorashadda, iyadoo taas ay keentay walaac kale oo laga qabo in dib u dhac ku keento xili dhaarinta Baarlamaanka 11aad April 14.
Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug Axmed Maclin Fiqi ayaa mudooyinkii dambe isku bedelay mucaaradka ugu weyn Qoor-Qoor, oo baraha bulshadda ka dhaliila siyaasadiisa. Wuxuu sheegay in Qoor-Qoor uu ku fashilmay shaqadii Galmudug, oo Al-Shabaab duleedka Caasimadda Dhuusamareeb soo gaartay, islamarkaana uu abaabulayo dagaal.